Elemental Rage yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Elemental Rage yemahara kwenguva pfupi
Kunze kwemitambo iyo iyo Cupertino-based kambani inotipa vhiki rega rega, kunyangwe dzimwe nguva ichitambudzwa nekutenga kwe-mu-app, vagadziri vanopawo maapplication avo emahara kwenguva yakati wandei kuti vavape kukurudzira uye vagoonekwa mune zvinyorwa zvevanonyanya kurodha pasi, nenzira iyi vanowana kuoneka kune vamwe vashandisi kuti vatore zvakare uye / kana kuitenga.
Ino nguva mutambo watinogona kurodha mahara, Iine mutengo wenguva dzose we4,99 euros mune yayo vhezheni ye iPhone, uye 6,99 mune yayo vhezheni yeIpad. Elemental Rage inyanzvi yekushambadzira iyo vese vateveri veMetroidvan vachada.
Mumutambo uyu tinopinda mushangu dzeHuna, tichitungamira boka diki revarwi vakashinga, vatinozosangana navo nehutsinye hwaDeven, muroyi ane simba ane rima uyo yatora iyo Elemental Midzimu uye akagadzira uto rezvisikwa zvakasviba, zvisina mweya zvinoparadzira humambo hwake hwezvakaipa.
Nakidzwa ne ruzha rukuru, mafambiro ekugadzirisa, nharaunda dzakasarudzika... yakanaka kune vese vanoda mitambo yepuratifomu iyo mumakore achangopfuura yanga ichitsakatika muzvitoro zvemitambo asi yaive yakakurumbira makore mashoma apfuura
1 Elemental Rage HD Zvimiro
2 Elemental Range ruzivo
3 IPhone vhezheni
4 IPad vhezheni
Elemental Rage HD Zvimiro
Ongorora huwandu hwakawanda hwemapuratifomu, azere nekuita, mapuzzle uye ndima dzakavanzika.
Tarisana nezvisikwa zvine rima zvine ngozi, unganidza zvinhu uye nekuvandudza zvombo zvako
Unleash the Elemental Spirits kuti iwedzere padanho rechinhu chimwe nechimwe (mweya, pasi, mvura nemoto), uwane kufamba kune simba uye usvike munzvimbo nyowani
Hunhu uye nharaunda ine yakasarudzika maitiro
Epic yekutanga rwiyo
Elemental Range ruzivo
Inoenderana neIOS 4 kana kupfuura. Izvo zvinoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod Kubata.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Elemental Rage yemahara kwenguva pfupi
Breadcrumb10 inogonesa iyo nyowani nzira yekudzokera kune yapfuura kunyorera
Maitiro ekuisa tvOS 10 beta usingaibatanidze neMac